A Wrinkle in Time ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
MMATV ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် 2018ထွက် movieလေးဖြစ်တဲ့ A Wrinkle in Time ဆိုတဲ့ လုံးဝမိုက်တဲ့Movieလေးပါ
Disney ဆိုတော်တော်များများကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုတစ်ခေါက်ကတော့လတ်တလောမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် Disney ကလွှင့်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်?
သဘာဝလွန်ဇာတ်ကားတွေကိုမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ?
ဒီကားရဲ့ Film makerကတော့ Wreck-It Ralph,
Frozen,Zootopiaတို့ကိုအသက်သွင်းထားတဲ့ Jennifer Lee ဖြစ်ပါတယ်
ဒါရိုက်တာကတော့ Ava DuVernayဖြစ်ပါတယ်
1962လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Madeleine L’Engle ဝတ္ထုကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီ အခုလက်ရှိမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့ကားပါ
Distributors တွေကတော့ Walt Disney Studios,Motion Picturesတို့ပါ
ဒီကားလေးမှာ ပါဝင်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ အင်္ဂလိပ်ကားကြည့်နေကြသူတွေနဲ့မစိမ်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေပါ Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Maindy Kaling, Chris Pine, Storm Reid နဲ့ Levi Miller တို့ကအဓိက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
အဓိကဇာတ်ဆောင်ကလေးတွေကလဲ သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းပါတယ်။လျှို့ဝှက်နက်နဲပြီး ပဟေဠိဆန်တဲ့စိတ်ကူးပုံဖော်ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်⚡⚡
နာဆာအဖွဲ့ဝင်သိပ္ပံပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံမှာ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိတဲ့ သမီးကြီး မက်♀️နဲ့ ဖျတ်လတ်သွက်လက်တဲ့သားငယ် ချားလ်ဝေါလေ့စ်♂️ ဆိုပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်
သူတို့အဖေ ပျောက်သွားပြီးနောက်လေးနှစ်ကြာတာ့ တစ်ညမှာချားလ်ဝေါလေ့စ်က မစ္စစ်ဝှက်စစ်ဆိုတဲ့နတ်မိမယ်စေတမန်တစ်ယောက်ကို အိမ်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတာကနေ မစ္စစ်ဟူး မစ္စစ်ဝှခ်ျဆိုတဲ့နောက်ထပ်၂ယောက်နဲ့ပါတွေ့ပြီး သူတို့သုံးဦးက ကလေးတွေရဲ့ အဖေပျောက်ရှာပုံတော်ခရီးကို ကူညီပေးကြတယ်။
မောင်နှမ၂ယောက်အပြင် မက်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကယ်လ်ဗင်ကပါ အဖေပျောက်ရှာပုံတော်ခရီးမှာ ကူညီရှာပေးကြတယ်။
နတ်မိမယ်စေတမန်တွေရဲ့အပြောအရ သူတို့အဖေက စကြဝဠာကြီးရဲ့ထောင့်တစ်နေရာမှာပိတ်မိနေတာကို သိပြီး သူတို့အဖေကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်
*OST လေးတွေကလည်းတကယ်ကို နားထောင်ကောင်းပါတယ် SIA တို့ Demi Lovato တို့လိုနာမည်ကြီးတွေကသီဆိုပေးထားတာပါ movie ထဲက effect တွေ visualတွေကလဲ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်??
Translated by SDL,HMN & May Thinzar Myint
Openload.co Myanmar962MB Download Openload.co Myanmar653MB Download Soliddrive.co Myanmar962MB Download Soliddrive.co Myanmar653MB Download
Trailer: A Wrinkle in Time ( 2018 )